Ubuntu Touch 12 iri pano uye idzi nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu Touch 12 iri pano uye idzi ndidzo nhau dzayo
Munguva pfupi yapfuura, vakomana vanobva muchirongwa cheUBports (iyo yakatora kusimudzira kweiyo Ubuntu Kubata nharembozha papuratifomu mushure meCanonical yakaparadzaniswa nayo) yakaburitsa vhezheni itsva yeUbuntu Kubata OTA-12 firmware kune muparidzi, iyo yave kuwanikwa kune ese anotsigirwa zviri pamutemo mafoni uye mapiritsi akaiswa neUbuntu-based firmware.
Iyo nyowani vhezheni ye firmware yakaburitswa neBBports Izvo zvinoyemurika shanduko kune itsva kuburitswa kweMir 1.2 uye iyo Unity 8.20 goko.
Kunyangwe mune ramangwana, rutsigiro ruzere rwekuvhurwa kweApplication mafomu rinotarisirwa, zvichibva pane zvakawanikwa zveiyo Anbox chirongwa.
1 Main nhau dzeUbuntu Kubata 12
2 Tora Ubuntu Kubata 12
Main nhau dzeUbuntu Kubata 12
UBports inosanganisira shanduko dzekupedzisira dzakagadzirirwa neCanonical yeUni8. Tsigiro yeSmart Areas (Makuriro) yamiswa uye yechinyakare chidzitiro chemumba chabviswa, pachinzvimbo chitsva App Launcher app imba interface inokurudzirwa.
Iyo yekuratidzira server Mir yakagadziridzwa kubva mushanduro 0.24, yakatumirwa kubvira 2015 kushanduro 1.2, iyo yakabvumidza vatengi kuita zvichienderana neWayland protocol. Zvakare, rutsigiro rweWayland harusati rwavapo kune Android chikuva chakavakirwa zvishandiso nekuda kwekusavapo kwekuitwa, asi kuvaka basa kwePinePhone uye Raspberry Pi mabhodhi akatotamisirwa kuWayland.
Naizvozvi, nhanho inotevera ichave yekuvandudza kune yazvino vhezheni yeMir 1.8, inozove nyore nyore kupfuura kuchinja kubva pabazi 0.24.
Dzimwe shanduko dzinounzwa mushanduro iyi nyowani ndiyo kuchinjwa kwemavara, iyo inopa kusiyana kukuru kwekuparadzaniswa kwemavara uye kumashure.
Uyezve in iro basa rakaitwa rekuvandudza iyo chaiyo keyboard inoratidzwa uye kuti iko kugona kuchinjisa iyo keyboard kune iyo yekugadzirisa fomu kwakawedzerwa kuburikidza neswipe gesture kubva pazasi. Kupeta kaviri panzvimbo isina chinhu mufomu yekugadzirisa inoshandura iyo yekuraira kuratidza uye nzira dzekusarudza, iro Done bhatani ikozvino rinokutendera kuti ubude chero maitiro.
Mu Morph browser mune yakavanzika yekutsvagisa maitiro, kubuda chete kunodzima iyo data yeiyo yazvino chikamu uye kwete ese marongero aripo, uyezve ine yakasarudzika sarudzo yekudzora kubviswa kwemakuki mumasetingi.
Pamidziyo ine akawanda-mavara maLED, chiratidzo chevara chechaji yebheteri inowedzerwa. Kana muripo wacho wakaderera, chiratidzo chinotanga kupenya orenji, panguva yekuchaja chinovheneka chena, uye kana chazara zvakakwana, chinoshanduka kuva girini.
Pane zvishandiso zveFairPhone 2, iyo SIM kadhi inoshandura yega ku4G modhi pasina kudiwa kwekushandura imwe slot kune 2G modhi.
Iwo OAUTH makiyi ivo pachavo eGoogle masevhisi anobatanidzwa, zvichikubvumidza iwe kuyananisa neGoogle's karenda kuronga uye bhuku rekero. Panguva imwecheteyo, Google inovharira mabhurawuza anogona kunge ari panjodzi pamainjini ekare, izvo zvingangoda kuchinjisa Mushandisi Wemashandisi kana uchibatana neGoogle services.
Yeimwe shanduko ayo anounzwa mushanduro iyi nyowani:
Kurongeka kwemabhokisi ebhokisi kwakagadziridzwa kune angangoita ese ekushomeka kunyorera.
Yakagadzirisa kutaridzika kweimwe dhairekitori kuratidza mamiriro emabhatani nekufambisa mumvuri pasi.
YeNexus 5, OnePlus One, uye FairPhone 2, mutyairi anodikanwa kutanga Anbox (nharaunda yekumhanyisa Android maapps) yakawedzerwa kune yakajairwa kernel.
Mune mafomu anoenderana newebhu webhu mudziyo, iko kugona kurodha mafaera kwakawedzerwa.
Wakawedzera rutsigiro rwekugadzirisa otomatiki upamhi kune saizi screen. Iyo inotevera vhezheni inotarisirwa kugadzirisa iyo QtWebEngine injini kune vhezheni 5.14.
Tora Ubuntu Kubata 12
Kana iwe uchifarira kuyedza iyi nyowani nyowani, iwe unofanirwa kuziva izvo yakagadzirirwa mafoni OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4 / PRO 5, Bq Aquaris E5 / E4.5 / M10.
Kuburitswa kwakavakirwa paUbuntu 16.04 (iyo OTA-3 kuvaka yaive yakavakirwa paUbuntu 15.04, uye kubva paOTA-4, iyo shanduko kuUbuntu 16.04 yakaitwa).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Ubuntu Touch 12 iri pano uye idzi ndidzo nhau dzayo
Aldo Ernesto Gonzalez akadaro
Ini ndaifunga kuti mune chero Android 9 asi ini ndinoona kuti inobvumidzwa mune iwo mafoni chete.
Ndatenda ndinenge ndakamirira shanduko.
Pindura kuna Aldo Ernesto Gonzalez
LibreOffice 7.0 yatove neyayo yekutanga vhezheni inowanikwa yekurodha pasi